Iindaba -Ifot ihambisa iiyunithi ezingama-2,790 zeebhasi zamandla amatsha eBeijing
Iifoto zisa iiYunithi ezingama-2,790 zeeYunithi zeeBhasi zaMandla eNtsha eBeijing
Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kwinyanga yoKwindla, kwabanjwa umsitho omkhulu kwikomkhulu lekomkhulu laseFoton eBeijing ukuphawula ukuhanjiswa kweeyunithi ezingama-2,790 zeebhasi zamandla ezintsha kumthengi wabo, kwiQela lezoThutho loLuntu laseBeijing. Ngokongezwa kwenani elikhulu leebhasi ezintsha zeFoton, inani elipheleleyo leebhasi zamandla zeFoton ezisebenzayo eBeijing lisondela kwiiyunithi ezingama-10 000.
Kumsitho wokuhanjiswa, uKong Lei, uSekela Mlawuli we-Beijing Information and Economy Bureau, uchaze ukuba inani elikhulu kangaka leebhasi zamandla zeFoton ziya kufaka amandla amatsha kuphuculo notshintsho lwenkqubo yezothutho lukawonkewonke eBeijing.
UZhu Kai, Umphathi Jikelele weQela lezoThutho loLuntu eBeijing, uthetha kakhulu ngentsebenziswano yenkampani yakhe neFoton, esithi la maqela mabini azakuqhubeka nokwenza nzulu intsebenziswano yokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni kwindawo enkulu. Ngokwe-Zhu, iBeijing yezoThutho loLuntu liThengile inani elipheleleyo leeyunithi ezingama-6,466 zeebhotile ze-Foton AUV ukusuka ngo-2016 ukuya ku-2018 ngexabiso elipheleleyo le-10.1 billion RMB.
Njengomnye wabadlali abakhokelayo kushishino lwamabhasi amatsha e-China, i-Foton yenze impumelelo entle ngokubhekisele kwinto entsha yetekhnoloji kunye nentengiso yezithuthi zamandla amatsha kule minyaka ilishumi idlulileyo.
Ngombulelo wokusebenza nzima, iFoton ithengise iiyunithi ezingama-83 177 yezithuthi kwaye ithengise iiyunithi ezingama-67,172 kwiinyanga ezimbini zokuqala kulo nyaka, inyuke nge-17.02% kunye ne-17.5% ngokwahlukeneyo.